Luis Suarez Oo Ka Tagaya Atletico Madrid, Shaqsiga Uu Ka Cadhaysan Yahay & Kooxda Uu Qaabka Bilaashka Ah Ugu Biirayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLuis Suarez Oo Ka Tagaya Atletico Madrid, Shaqsiga Uu Ka Cadhaysan Yahay & Kooxda Uu Qaabka Bilaashka Ah Ugu Biirayo
Luis Suarez Oo Ka Tagaya Atletico Madrid, Shaqsiga Uu Ka Cadhaysan Yahay & Kooxda Uu Qaabka Bilaashka Ah Ugu Biirayo
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Luis Suarez ayaa lagu soo warramayaa inuu doonayo inuu iskaga tago kooxdaas kaddib xidhiidhka kala dhaxeeya tababarihiisa Diego Simeone oo noqday mid adag.
Suarez oo heshiiskii uu u saxeexay Atletico Madrid ku daray qoddob u ogolaanaya inuu xagaaga si bilaash ah ku tagi karo haddii uu u baahdo ayaa qandaraas laba ilaa saddex sano ah ka helay kooxda ree Maraykan ee Inter Miami oo uu mulkiyadeeda leeyahay David Beckham.
Sida uu sheegayo warsidaha ree Spain ee Todofichajes, xidhiidhka xun ee u dhaxeeya dhaliyaha ree Uruguay iyo tababare Simeone ayaa sababi kara inuu iskaga tago kooxda suuqa sanadkan.
Suarez ayay warbixintu sheegaysaa inuusan ku faraxsanayn tababaraha ree Argentina isla markaana aan ku qanacsanayn hab ciyaareedka uu kooxda u dheelsiiyo.
Taas bedelkeeda Luisito ayaa la filayaa inuu xiiso ka heli doono kooxaha kala ah Inter Miami iyo kooxdiisii hore ee Liverpool oo uu ku dhawaad toddoba sano kahor ka tagay.
Suarez ayaa ahaa mid aad looga jecel yahay gegida Anfield kaddib markii uu dhinaca Ajax kaga soo biiray sanadkii 2011 isaga oo 82 gool ugu soo dhaliyay 133 kulan oo uu u ciyaaray kahor intii uusan Barcelona u wareegin sanadkii 2014.
Marka laga yimaado xaqiiqada ah in El Pistolero uu ku jiro sanadihii ugu dambeeyay ee waayihiisa ciyaareed haddana waxa uu ahaa mid bandhig heer sarre ah sameeyay xilli ciyaareedkan.
Kaddib markii uu Barcelona xagaagii lacag 5.5 Milyan pound ah ugaga yimid, Suarez ayaa hadda booska 2-aad kaga jira kala sarreynta gool dhalinta La Liga isaga oo 19 gool kusoo dhaliyay 26 kulan oo uu kasoo muuqday.